Mpanamboatra sy mpamatsy bisikileta eny an-dàlana - Orinasa e-bisikileta an-dalambe China
Mitaingina amin'ny ho avy
FUNNCYCLE, dia R&D sy orinasa mpanamboatra manokana amin'ny bisikileta elektrika sy scooter mihoatra ny 10 taona.
Ireo injenieranay dia miaraka am-pahamendrehana indrindra amin'ny scooter elektrika R&D sy bisikileta elektrika.
SEBIC 16 mirefy kodiarana kely ...
SEBIC 700C bateria miafina v ...
SEBIC 20 inch 8 hafainganam-pandeha suspe ...
SEBIC tanàna 28 mirefy bisikileta herinaratra an'ny vehivavy bafang
Rafitra fanaraha-maso volo Hydraulika ety aloha sy aoriana izay misy herinaratra tsy misy tariby; ny rafitra fampiatoana fork aloha sy ny fidorohana ny fikorontanana fatratra dia mampihena ny fikorontanana ary mamaly ny toe-javatra samihafa.
SEBIC new style vintage city promoter 36V 250W 700C enduro Retro bisikileta elektrika
Rafitra PAS Ny rafi-pitantanana herinaratra manan-tsaina dia ny teknolojia misy patanty afaka mampitombo ny tahan'ny fampiasana herinaratra output mihoatra ny 83% ary manitatra tsara ny androm-piainan'ny motera sy bateria.
SEBIC futuristic city vaovao manandanja ebikes vaovao
Mahery vaika ny HSD fa kely: mora ny mitantana, mora zaraina, mahazo aina tokoa, —ary izany rehetra izany amin'ny famolavolana kely fohy kokoa noho ny bisikileta mahazatra. Na mitaingina ianao, mitahiry, na mamindra azy, ny rivotra dia mora tantana. Izy io dia fohy kokoa noho ny bisikileta mahazatra ary ny lanjany dia mitovy amin'ny ebike mahazatra.
SEBIC ebike lalana mahery vaika
Ho an'ity maodely ity dia nampiditra kodiarana malefaka sy CST 28 izahay miaraka amina kodiarana milanja 2.0-inch, ka afaka mihodinkodina mora foana ny ankamaroan'ny triatra, fipoahana ary lavaka mba hiantohana fa tsy misy mijanona eo amin'ny lalanao mankany amin'ny fotoana mahafinaritra .
SEBIC enduro afovoany mitaingina môtô lalana
Mahafinaritra ny mandeha haingana, fa mahafinaritra fotsiny raha mahazo aina ianao. Mampalahelo fa tsy dia miaraka matetika ny hafainganam-pandeha sy ny fampiononana, fa ny RH28MM nivoaka hanova izany.
SEBIC Tanora matanjaka an-tanàna 36v 48v bateria lithium bateria bisikileta bisikileta
Famolavolana miafina bateria alloy aluminium. Ny fanantonana dia nanamafy ny fork, lamaody kokoa, maharitra ary mateza. Ny jiro sy ny anjomara LCD dia mamela anao handeha soa aman-tsara kokoa amin'ny alina.
Moto herinaratra SEBIC 28 mirefy 250w 350w 36v 48v bisikileta
Rafitra fanaraha-maso volo Hydraulika ety aloha sy aoriana izay misy herinaratra tsy misy fiarovana; Ny rafitra fampiatoana ny fork aloha dia mampihena amin'ny fomba mahomby ny fikorontanana ary mamaly ny toe-piainana samihafa. Fiara avo lenta Shimano 8-Speed, fiovaovan'ny elanelam-potoana ary ny fanamorana ny tany.
SEBIC 700c kapila mivezivezy kilasika eraky ny tanàna ebike
Ankafizo ny tombo-tsoa rehetra amin'ny bisikileta fa tsy misy fihenjanana amin'ny SEBIC 700RM Electric Hybrid Bike. Ilay e-bisikileta 700RM dia misy moto pedal assistant 500-watt manampy anao-bisikileta ahafahanao mitaingina lavitra kokoa ary mitaingina havoana mideza mora foana. Safidio fotsiny ny haavon'ny fanampiana anao amin'ny mpanara-maso sy ny pedal thumb toy ny mahazatra.
SEBIC 26 mirefy malaza amin'ny fomba fanatanjahan-tena an-dàlambe mandeha bisikileta mandeha amin'ny herinaratra mahery
Miaina bisikileta amin'ny fomba vaovao amin'ny alàlan'ny bisikileta elektrika 26 m amin'ny Black. Ity bisikileta mitondra haingam-pandeha 7 hafainganam-pandeha ity dia manana endriny aliminioma ary ity mitaingina malama ity dia hahatonga anao any amin'izay tianao aleha mora foana. Izy io koa dia manana freins disk aloha sy aoriana. Ity e-bisikileta ity dia miaraka amin'ny bateria (capacité 13Ah) sy charger.
Bisikileta elektrika SEBIC 700C 6061 bisikileta mahery vaika
Ankafizo ny any ivelany sy ny tombontsoa ara-pahasalamana amin'ny mitaingina bisikileta, tsy misy ny olana atrehin'ny toe-javatra toy ny fiakarana havoana hatsembohana sy ny fotoana maharitra, miaraka amin'ny SEBIC e-Bike. Ity e-bisikileta ity dia misy motera sy batery tafiditra ao anaty bisikileta.
SEBIC 700C batterie miafina any an-tanàn-dehibe bisikileta herinaratra
Ny zava-dehibe indrindra amin'ity ebike ity dia ny safidy drive drive sy ny fehikibo. Manana ny tombony manokana izy ireo, malaza be amin'ny mpanjifa izany.